अभिकर्ता तपाईको बित्तिय सल्लाहकार हुन, त्यसैले सम्मान गरौ » Khulla Sanchar
–प्रकाश सापकोटा २ वर्ष अगाडि
काठमाडौं – हाल नेपालमा १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी रहेका छन । जसको आ-आफ्नै बिमालेख तथा पोलिसीहरु रहेका छन । कतिले जनमानसमा राम्रो व्यापार गरिरहेका छन भने, कतिले आफुलाइ स्थापित गराउन मात्रै पनि सकस गरिरहेका छन । जुन हामी उनिहरुले बेला बखत निकाल्ने कम्पनिको रिपोट बाट पनि प्रस्ट थाहा पाउन सक्छौ ।
यो सबै व्यबसायको अलबा जीवन बिमा कम्पनिको मेरुदण्ड भनेको विभिन्न कम्पनिमा आबद्द अभिकर्ता नै हुन । तर दुखद कुरा हाम्रो नेपाली समाजमा विभिन्न कम्पनिका मेरुदण्डको रुपमा कार्यरत अभिकर्ता प्रती हेरिने दृस्टिकोणको कारणले समग्र बिमा बजार फस्टाउन सकिरहेको छैन । एउटा हाल चालाईको घटना प्रस्तुत गरे मैले यहाँहरुलाइ…
कुरा केही दिन अगाडिको हो, म एक मिडियाकर्मी भएको नाताले एकजना प्रतिस्ठित व्यापारी सग उनको समग्र ब्यपार ब्यबसायको बारेमा कुरा गर्दै थिय । त्यतिकैमा यक्कासी उनको फोन बज्यो…र उनले उठाउन मन गरिरहेका थिएन, र मैले सङ्केत गरे र उहाले फोन उठाउनु भयो र भन्नू भयो…म मिटिङ मा छु मलाइ डिस्टर्ब नगर्नुस, यति भन्दै ती ब्यक्तिले आफ्नो अनुहारलाइ अमिलो बनाउदै फोन काटिदिए र मलाइ भने हेर्नुसन सर ।! एउटा बिमा कम्पनिको एजेन्ट पछि लागेर हैरान गरिसक्यो… र यती सुन्ने बितिकै मलाइ ती व्यपारी देखि दया लागेर आयो, यत्रो व्यापार गर्ने मान्छेको सोच … त्यो ठाउमा अभिकर्ता पछि लागिरहेको थिएन ।
उनि र उनको परिवार अनि भविस्यको बारेमा केही सल्लाह दिई बचत गर्नुस भनी राए दिन खोजिरहेको एउटा पथप्रदर्सक थियो । जुन कुरा व्यापरिकै हितमा थियो । र मैले उहाँलाई केही भन्न चाहिन र त्यहाँबाट मलाइ अलि हतार छ भनी उहाँ सग बिदा भइ निस्के… मलाइ त्यो कुराले मनमा कता कता नमिठो बनाइरहेको थियो । उहाँले मलाइ नभनेता पनि म जस्तै झण्डै ५ लाख अभिकर्तालाइ भनिएको थियो ।
यो घटना बाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो समाजमा अभिकर्तालाइ कुन रुपमा हेरिन्छ भनेर.. हामी सबैले यो बुज्न जरुरी छ कि।
बिमा एन २०४९ मै उल्लेखित छ कि अभिकर्ता भनेका बिमित र बिमा गर्ने कम्पनी बिचको मध्यस्थकर्ता वा पुल हुन । नेपाल जस्तो अल्पबिकसित देशमा बेरोजगार अशिक्षा गरिबिको कारण मानिस आफै बिमा गर्न राजी हुदैनन । जसको कारण नेपाल सरकारको मातहतको निकाय बिमा समितीबाट लाइसेन्स प्राप्त अभिकर्ता ग्राहक समक्ष भइ उचित परामर्स दिई ग्राहकलाइ कम्पनी समक्ष लिएर आउने काम अभिकर्ताले गर्ने गर्छ।
जसको फलस्वरुप अभिकर्ताले बिमा समितीबाट तोकिएको रकम पाउने गर्छन । तर बिल्कुलै यो होइनकी ग्राहकले तिरेको रकम बाट अभिकर्ताले कमिसन पाउछन…. अभिकर्ताले कम्पनी बाट आफ्नो ब्यबसायको आधारमा छुट्टै रकम पाउने गर्छन । जुन बिमा समिती बाट तोकिएको हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा बिमा गराउन त्यति सहज छैन । र पनि अभिकर्ताले दिन रात नभनि काम गरिरहेका छन । जस बापत उनिहरुले परिश्रमिक पाउने हुन। जसलाइ हामी कमिसन भन्छौ । आखिर काम गरेपछी जस्ले पनि पारिश्रमिक पाइहाल्छ।
त्यसकारण हामिले के बुज्न जरुरी छ भने अभिकर्ता कुनै एजेन्ट होइन पैसाको लागि काम मात्र गर्ने..! उनिहरु त तपाईं अनि तपाइको परिवारको पथप्रदर्सक अनि समाज सेबि हुन । जसले तपाइलाइ थोरै थोरै बचत बाट ठुला ठुला सपना निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन । तपाईं र तपाइको परिवारको भबिस्य खोजिरहेका हुन्छन। त्यसकारण अभिकर्तालाइ सम्मान गर्न सिकौ, र बिमा व्यबसाय मार्फत सम्पुर्ण जनमानसमा सुखद परिवारको सिर्जना गर्न सहयोग गरौ ।
(लेखक नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका एजेन्सी म्यानेजर तथा पेशागत अभिकर्ता संघ महाराजगन्ज शाखाका सचिव र खुल्ला सञ्चारका सदस्य हुन् ।)